Indooneesiyaan dubartoonni poolisii ta’uu barbaadan qormaata dubrummaa dabrutu irraa eegama jetti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Indooneesiyaan dubartoonni poolisii ta’uu barbaadan qormaata dubrummaa dabrutu irraa eegama jetti
Indooneesiyaan dubartoonni poolisii ta’uu barbaadan qormaata dubrummaa dabrutu irraa eegama jetti
Akka angawoota Indooneesiyaatti dubartoonni poolisii ta’uu fedhan ciccimoo, fayyaqabeeyyii fi kan ‘hintuqamne, dubra duudaa’ ta’utu isaan irraa eegama. Kuni hangam dubartoonni fedhii poolisitti makamuu qaban adaba ykn safuu qabeeyyii akka ta’an beekuuf, akka amantaa angawoota biyyattiitti.
Dhimmicha kanatti hundi marga jiidhaa fi eebbaa miti kan darban. Yaadichi mormii fi marii oo’aa kaaseera; keessattuu kanniin mirga dubartootaaf falman biratti. Akka yaada namoota tokko tokkootti qormaanni wolfakkaataan kan dhiira irratti hingeggeeffamneef sababa addaaddummaa qaama dhiiraa fi dhalaatiif. Dabalataanis, hawaasa Indooneesiyaa keessatti dhiira osoo hintaane dubartoota kan akka mallattoo qulqullinnaatti ilaalaman.
Qabxiin mormii inni biroo akkaataa qormaanni kuni itti geggeeffamuu qeequu irratti kan xiyyeeffate. Daandiin dubrummaan jiraachuu doktoroonni ittiin mirkaneeffatan qaama saalaa dubartootaa keessa quba kaayuudhaan. Egaa, haalli qormaanni itti geggeeffamu kuni qabxii 2ffaa qaanessaa fi mormii kaasaadha, ummata yaada kana morman biratti. Adeemsi kuni, dubartoota qaanessaa fi mataa lafa laalchisaa ta’uu bira ce’ee bu’aan qormaataas woldhabsiisaa ta’uun nimala. kunis dubartiin takka dubrummaa kan dhabuu dandettuu wolqunnamtii saalaa qofaan mit. Dubartiin farad yaabbachuun, hujii humnaa hojjachuu dubrummaa dhabuu kan dandeettu ta’uu qorannoon saayinsii kan mirkaneessu.
Yaanni kuni hawaasa Indooneesiyaa woggaa 50 oliif bakka lamattii qoodaa ture. Yaanni mormii angawootaa, ‘sagaagaltoota humna poolisaa biyyattii keessatti arguu hinfeenu,’ kan jedhuudha. Sodaan mormitoota yaada kanaa, dhimmichi qaanessaa, akkasumas dubartootatti carraa poolisii ta’uu dhiphisa jedhu.
Woggaa dabre angawoonni ministera barnoota biyyattii yaada shamarran mana barnoota sadarkaa lammaffaa hundi qormaata dubrummaa fudhachuu qaban jedhu dhiheessanii turan. Garuu yaadichi mormii cimaa ummata irraa, keessattuu karaa saba-himaa ‘social media’, isa qunnameen kufe: osoo hinmilkaayin hafe.
Maddi The New York Times fi The Jakarta Post
Previous articleQabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan
Next articleManchastar, Arsenaal, Cheelsii fi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Liivarpuul ammas qabxii gate